दैनिक जिवनमा उपयोगी टु डु एपहरु - AsalKhabar
जि टास्क एक लोकप्रिय एवम एक्दमै मनपराइएको टू डू लिस्ट एप हो जसको फ्रि र पेड गरि दुइ संस्करण रहेको छ । फ्रि संस्करणमा समेत उत्कृष्ट फिचरहरु जस्तै विजेट, भ्वाइसको प्रयोग गरेर क्विक एडिङ्ग हुनुका साथै गुगल टास्कसँग सिङ्क्रोनिाइज समेत गर्न सकिनेछ । यसका साथै यसको प्रो संस्करणमा ब्याच टास्क एड, प्याटर्न लक र थेम समेत परिवर्तन गर्न सकिनेछ । यसका साथसाथै तपाइले आँफूले चाहेको खण्डमा गुगल नाउमा टाक्सहरु समेत थप्न सक्नुहुनेछ । सरल र प्रभावकारी एपहरुको खोजिमा यदी तपाई हुनुहुन्छ भने जि टास्क एक उत्कृष्ट रोजाइ बन्न सक्छ ।
टुडू लिस्ट एपको भिडमा टिकटिक पनि अर्को एउटा सरल,सहज एवम उत्कृष्ट टू डू लिस्ट एपको रुपमा आँफूलाई उभ्याएको छ । यस एपमा टू डू लिस्टको आधारबुत फिचर हुनुका साथै क्लाउट सिङ्कको पनि फिचर रहेकको छ जसले गर्दा आफ्नो टास्कको वारे जानकारी अन्य विभिन्न डिभाइसहरु प्रयोग गरेर समेत गर्न सकिन्छ । यसमा समाबेश गरिएको ट्याग सिस्टमले आफ्ना आवश्यक, न्यून आवश्यक र अत्यावश्यक टास्कलाई प्राथमिकताका आधारमा छुट्याउन सकिनेछ ।
साथसाथै यो एपको आफ्नै विजेट प्रयोग गरेर थप सहज र सरल रुपमा एप प्रयोग गर्न सकिनेछ । यस एपको प्रो संस्करण थप परिष्कृत र अत्याधुनिक रहेको छ । यसको प्रो भर्जनमा टास्क म्यानेजमेन्ट, कोलाब्रेसन सपोर्ट र अन्य फिचरहरुको परिष्कृत रुप समावेश गरिएको छ । प्रो भर्जनलाई सब्सक्राइब गरेर प्रयोगकर्ताले थप फिचरको मज्जा लिन सक्नेछन । यस एप प्ले स्टोरमा निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।
टु डु लिस्ट एप अर्को उत्कृष्ट एप हो । यस एपका विकासकर्ताले यो एपको नामाकरणमा खासै धेरै मेहेनत नगरेतापनि यो एप असाध्यै राम्रो रहेको छ । यसमा सबै आधारभूत टू डू फिचर र आफ्नो लिस्टमा रहेको कार्य गर्नकालागि सम्झाउनका खातिर रिमाइन्डर समेत समाबेस गरिएको छ । यसको इन्टरफेस उन्डरलीस्टसँग मिल्जो जुल्दो रहेपनि यो खासै नराम्रो भने होइन । चलाउन एक्दमै सहज रहेको यो एपमा विभिन्न फिचरहरु समावेश गरिएका छन जसमध्ये भ्वाइस कमाण्डबाट टास्क थप्नु , विजेट र अन्य फिचर समावेश गरिएको छ । यो एप प्ले स्टोरमा सित्तैमा डाउनलोड गर्न सकिनेछ भने यसको फूल भर्जनमा अपग्रेड गर्दा २.९९ डलर थप तिर्नु पर्नेछ ।
टु डू लिस्ट एपको क्षेत्रमा सबैभन्दा चर्चित रहेको एप हो उन्डरलिस्ट । यो एप माइक्रोसफ्टले २०१३ मा खरिद गरेको हो । यसमा अन्य एपहरुमा रहेका फिचरहरु हुनुका साथै क्रस प्लाटफर्म सपोर्ट, एट्याचमेन्ट अप्सन कोलाबोरेसन फिचर र फोल्डर फिचर समावेश गरिएको छ । यी फिचरहरुको साहयताले आफ्नो टू डू लिस्ट ब्यवस्थापन गर्नमा विषेश भूमिका खेल्ने गर्दछ । यसका अलावा यसमा मेटेरियल डिजाइनको प्रयोग गरिएको छ जसलाई एक्दमै रुचाइएको हो । यो एप चलाउनलाई सरल, सहज हुनुका साथै यस एप अन्य एपको तुलनामा शक्तिशाली समेत रहेको छ ।
टास्क एप एस्ट्रिड टु डू लिस्ट क्लोन एप हो । एस्ट्रिड एक टाक्स म्यानेजर एप हो जसलाई याहुले २०१३ मा बन्द गरेको थियो । यो एक ओपन सोर्स एप्लिकेसन हो जुन चलाउन एक्दमै सरल रहनुका साथै यसमा फम्र्याट रिड गर्न सहज हुनुका साथै यसमा मेटेरियल डिजाइनको प्रयोग गरिएको छ । टास्क एपले एस्ट्रिडको एक राम्रो विकल्पको रुपमा आँफूलाई अघि सार्न सफल भएको हो । यो एपलाई प्ले स्टोरबाट सित्तैमा डाउनलोड गर्न सकिनेछ भने यसलाई सस्क्राइब गरे पश्चात अन्य उत्कृष्ट फिचरहरु अनलक हुनेछन ।
Previous कसरी एउटै जीमेल एकाउन्टको एड्रेस धेरै तरिकाबाट लेख्ने ?
Next साउदीको रहस्यमय खाडल, जुन कहिल्यै पुरिँदैन
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषलाई दिए एक महिनाको तलब
Copyright © 2020 All rights reserved - Asal Sathi Media Pvt.Ltd. | Desigin By Nabeen Chhetri.